Arjen Robben Oo Ka Caawiyay Bayern Munich Inay Dubato Dortmund Una Gudubto Semi-finalka German Cup.
Bayern Munich ayaa sii nooleysay riyadeeda ku aadan inay seddex koob soo xerogeliyaan xilli ciyaareedkan iyagoo 1-0 ku dubtay kooxda difaacaneysa German Cup ee Borussia Dortmund islamarkaana xaqiijistay booskooda semi-finalka koobka.
Gool uu dhaliyay Arjen Robben wax yar ka hor dhamaadkii qeybta hore ee ciyaarta ayaa kala saartay labada kooxood, iyadoo goolhayaha Borussia Dortmund Roman Weidenfeller uu fursado badan oo dahabi ah ka badbaadiyay kooxda FC Hollywood.
Lakiin daqiiqadii 43aad ee ciyaarta ayaa shaki galay daafaca Marcel Schmelzer waxa ay u ogolaatay Philipp Lahm inuu quudiyo Robben kaasoo isna kubada shabaqa ku hubsaday.
Ciyaarta oo xamaasad laheyd ayaa Bayern Munich ay u dabaaldegtay si weyn, madaama mudooyinkii u danbeysay ay ku adkeyd inay ka talaabsadaan kooxda heysata horyaalka Bundesliga ee Borussia Dortmund.
Dhanka kale kooxda Freiburg ayaa iyadana ku gudubtay semi-finalka ka dib markii ay 3-2 kaga talaabsatay Mainz, halka Stuttgart ay iyadana 2-0 dirtay kooxda Bochum.
- See more at: http://www.laacib.net/2013/02/28/chelsea-oo-garaacday-middlesbrough-xaqiijisayna-kulanka-wareega-8da-fa-cup-ee-manchester-united/#sthash.v6kR6CdA.dpuf
Rafael Benitez: Waxbo Yaysan Is Dhibin Taageerayaasha Chelsea Waan Baxayaa Dhamaadka Xilli Ciyaareedkan.
Tababaraha kooxda Chelsea Rafa Benitez ayaa weerar ku qaaday taageerayaasha kooxda Chelsea oo uu sheegay inay leeyihiin ajende isaga looga soo horjeedo, waxaana uuna dood ka keenay in kooxda ay siiso jagada ah tababaraha ku meel gaarka ah halkii loogu yeeri lahaa tababaraha kooxda.
Tababaraha reer Spain ayaa si qoto dheer ugu hadlay arimahan ka dib kulankii ay ku xaqiijisteen wareega 8da FA Cup oo ay taageerayaasha ay ku heesayeen “Rafa Banitez, waa naqaanaa waxaad tahay”.
“Waxaan ka niyadjabsanahay group ka tirsan taageerayaasha oo heesaya, waxaana qabaa inaysan wax axsaan ah u sameynoynin kooxda” ayuu Rafa Benitez u sheegay BBC Radio 5live.
“Waa inay taageeraan kooxda halkii ay waqtiga isaga dhumin lahaayeen sameynta booror iyo heeso aniga iga dhan ah.
“Waa inay taageeraan ciyaartoyda. Waxaan ahay tababare qibrad leh, ilaa maalinta ugu danbeysana shaqadeyda ugu fiican waan qabsan doonaa.
“Waxa ay isiiyeen jagada ah ‘tababare ku meel gaar ah’. Waa qalad aad u weyn. Aniga ayaa ah tababaraha, waxaana tababari doonaa kooxda ilaa daqiiqada ugu danbeysa.
“Hadii ay doonayaan inay waqtiga iska dhumiyaan sababtoo ah waxa ay leeyihiin qorshe, waa inay aqbalaan mas’uuliyada marka ay wax qaldamaan.
“Xaalada ma ahan ‘ waxaa dhaleeceynaa hebel iyo hebel’. Waa inay kooxda oo dhan taageeraan. Hadii aan wadajir muujino Champions League waan u soo bixi doonaa. Hadii kale, heesahooda ayay iska wadan karaan, laakiin waxa ay ku sameyn doonaan Europa League.
“Waa inay ogaadaan inaysan wax axsaan u sameyneynin taageerayaasha kale ee kooxda, iyo sidoo kale ciyaartoyda.
“Waxaan ahay qof shaqadiisa yaqaana, waxaana qabsanayaa shaqadeyda. Waxa aan doonayo ayaa ah inaan u badiyo kulan kasta Chelsea Football Club.
“Dhamaadka xilli ciyaareedkan waan bixi doonaa, waxba yaysan iga walwalin aniga.
“Wax kaliya ay tahay inay sameeyaan waa inay taageeraan kooxdooda, taageeraan ciyaartoyda. Waa group ajenda wata. Waa inay ogaadaan in taageerayaasha kale ay doonayaa in kooxda ay sannadka danbe ciyaarto Champions League.”
Tottenham Oo Gaashaanka U Daruurtay Dalab 40 Milyan Ah Oo Real Ay Ku Dooneyso Bale.
Warbixino ka imaanaya Ingiriiska ayaa sheegaya in kooxda Tottenham ay gaashaanka u daruureen dalab rasmi ah oo kaga yimid Real Madrid kaasi oo gaaraya 40 milyan oo gini oo ay ku doonayaan xidiga kooxda ee Grateh Bale.
Tottenham ayaa la tilmaamayaa in laacibkaasi hadiiba ay dhacdo in ay fasaxaan in kaliya ay kaga samri karaan aduun gaaraya 60 milyan oo euro halka Real-na u muuqato in taas ay ku adag tahay .
Kooxdaan reer Ingiriis dhankooda waxa ay u muuqanayaan kuwo fasaxaya laacibkaasi xilli badelka Gareth Bale ka heleen kooxdaReal Sociedad ee dhashay dalka faransiiska Antoine Griezmann kaasi oo ay haatan wadahadalo la fureen.
Waxaa xusid mudan in hishiiska Gareth Bale ee Tottenham uu dhamaanayo sanadka 2016-ka , waxaana ku baxaya bixitaankiisa lacag gaareysa 50-milyan oo euro , waxa uuna Bale doonaya in uu ka soo ciyaaro horyaal ka baxsan kan ingriiska , waxa uuna aad u xiisenaaa kooxda Real Madrid.
Daawo Video+Sawir mourinue iyo Shaqaalihiisa oo kufarxaya( 3-1) eey baarca kaga badsheyn iyo tageerayaasha real oo dhibaato badan geystay magaalada Baraca.
waxaa layaab leh inaad aragtid naadiga Real iyo toobabarihiisa haguhoreyee ineey aad ugu farxeyn badiskii ahaa 3-1 taas oo jamahiirta naadiga bilaabay ineey jijabiyaan naadiga banaankiisa iyo buuq iyo qeelo sameyeen laakin waxeey iloween markii lagaga badshay 5-0 oo bilaa buuq kudhamaatay ciyaartaas
bal nala daawo oo adiga xukun sawirada iyo video gaan
Ronaldo: Aad Ayaan U Jecelnahay Ku Ciyaarida Garoonka Camp Nou, Sabtidana Guul Ayaa Naga Go`an.
Xidiga kooxda Real Madrid Ronaldo ayaa muujiyay sida weyn ee uu ugu faraxsan yahay guushii xalay ay ka soo hoyiyeen kulankii Barcelona ee Cope Del Rey kaasi oo ku dhamaaday sedex gool iyo hal oo ay guusha ku raacday wiilasha Jose Mourinho.
Lugtii hore ee ciyaartii ee ka dhacday garoonka Real Madrid ayaa ku dhamaaday bar bar dhac min hal gool ah, waxa ayna haatan Real Madrid u soo baxeen Finalka koobkaan Cope Del Rey .
Ciyaarta ka dib ayuu Ronaldo ka yiri bogga Real Madrid: “Waxaan soo bandhignay ciyaar heerkeedu aad u sareeyo, waxaana muhiim ah in aan hambalyo u dirno kooxda , aad ayaan ugu wanaagsaneyn kulankii hore ee ka dhacay garoonkeena”.
Ronaldo ayaa dhaliyay laba ka mid ah sedexdii gool ee Real Madrid waxaana uu hadalkiisa raaciyay: “Waxaan u ciyaarnaa hab wanaagsan marka Barcelona kula ciyaareyno banaanka garoonkeena taasi waxaa cadeyneysa taariikhda, aad ayan u jecelnahay in aan ku ciyaarno Camp Nou”.
Ronaldo ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay: “Waxaa naga go`an in kulanka Sabtida ee Barcelona wada leenahay ee qeybta ka ah horyaalka in aan ka badino, sidoo kale waxaan u hanqal taageyna in Man United-na ka soo badino”
Rafael Benítez: Khilaaf Igalama Dhaxeeyo John Terry Kaliya Caafimaadkiisa Ayaan U Baqayaa.
Tababaraha kooxda Chelsea ayaa ku dooday in uusan jirin wax khilaaf ah oo kala dhaxeeya kabtanka kooxda ee John Terry , waxa uuna hadalkaan Rafael Benítez soo baxayaa ka dib markii warbaahinta ingiriiska qoreen in uu jiro khilaaf xoogan oo kala dhaxeeya Terry taas oo la xariirta sababta kursiga keydka loo farsiiay kulankii City .
Rafael Benítez ayaa beeniyay in ay wax ka jiraan wararkaas tilmaamayay in mushkilad ay kala dhex aloosan tahay Joh Terry waxa uuna yiri: “Ma fahmi karo sababta dadka ugu maleynayaan in Terry uu dareemayo rajo beel inkastoo aan marar badan ku celceliyay in Terry yahay daafaca kooxda walina ku taageereyno in uu ka sii wanaagsanaado heerkiisa haatan”.
“John Terry ayaa ka sheeganayay dhaawac waxa uuna garoomada ka maqnaa 16-todobaad sidaa darteed si joogto ah uguma tiirsanaaneyno anaga oo ka carareeyna in dhaawaciisa soo cusboonaado, waxa ayna warbaahinta tilmaameysaa in mushkilad jirto taas waa been, dhamaan ciyaartooyda waan ka wada hadalnay guuldaradii City waana arin iska dabiici ah” ayuu ku daray macalin Rafael Benítez.
Mar wax laga weediiyay xariirka kala dhaxeeya Terry ayuu yiri ” aad ayay u wanaagsan tahay , wax dhibna ma jiro walina waa daafaca kooxda kaliya waxaan ka baqeynaa in dhaawaciisa uu soo cusboonaado “.
sir lakashifay ciyaarta RealV Barca kahor mourinho ayaa amar kusiiyey lacibiintiisa ineey beegsadaan Messi iyo alvas
waxeey sheegay jornalka kasoo baxa spain ee layirahdo bayes in mourinho uu ku amaray lacibintiisa ineey beegsadaan Messi iyo Alvas sida eey uga baxaan ciyaarta oo khalkhal ugalaan.
hadaba rayigaas ayaa kasoo horjeestay laacibiin kamid yahay (Khedira,Varane,Carvalho) halka kale qaar kuraaceyn ineey sameyaan kuwaas oo kamid ah (Xabi Alonso,Raul Albiol)
kadib saxafadaas ayaa cara kamuujisay inuu sidaa kula taliyo lacibiintiisa taasi waxey abuureysaa in lasku dhaco iyo ciyaar nadiif laan ah.